Mashandisiro ekushandisa Google nyowani podcast app pane Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Mashandisiro ekushandisa Google nyowani podcast app pane Android
Mashandisiro ekushandisa Google nyowani podcast app pane AndroidNgatidzokerei pakubata neiyo nyowani iGoogle Podcasts interface, iyo kwenguva yakareba yanga iri mukutarisa kwekutarisirwa kwechikwata chevagadziri veichi chishandiso uye kuti mumaawa ekupedzisira chakaitwa kuti chiwanikwe kune imwe nhamba yevashandisi, pamwe mu para gadziridza ruzivo usati watanga kuburitswa kwepasirese.
Kana iko kunyorera kuvhurwa, mushandisi anoratidza meseji inomukoka kuti awane iyo vhezheni itsva yeGoogle Podcasts, ichijekesa yayo tmatatu makuru tabo: kubva pakutanga iwe unogona tsvaga yazvino Zvikamu zvako kunyoreswa (ine carousel menyu uye zvimwe zvidiki graphic shanduko), neyechipiri iwe unogona tsvaga zvirimo yaunoda uye kuburikidza neyechitatu iwe unokwanisa gadzirisa mitsara, kurodha pasi uye kunyorera.
Google Podcast: Mashandisiro uye mashandisiro matsva
Dzimwe nhau dzinogona kuwanikwa mu Zvirongwa menyu, senge sarudzo ye bvumira otomatiki kurodha pasi yezvikamu zvitsva uye iyo iyo iyo auto bvisa kuchengetedza memory yekuchengetedza pane chishandiso kana peji rakapihwa kune zviziviso zvine chekuita nekunyorera kwavo (vashandisi vane kugona kuona kuti ndeapi mapurogiramu avanoda kugamuchira machenjedzo).
Iko hakuna ruzivo parizvino kuti izvi zvichaburitswa riini vhezheni itsva yeGoogle Podcasts kune vese vashandisi. Pane kudaro, iyo yazvino vhezheni inowanikwa paGoogle Play Chitoro.
Mushure mekumisikidza iyo Android Google Podcast app, Google irikufambira mberi kwakati wandei kune fomu rechirongwa rinogona kushandiswa mu chero pc.
Parizvino iko kunyorera kuri muchikamu chisina kusimba, kwete ese mashandiro eiyo Android application anopihwa, muchokwadi isu tinogona chete kuteerera kune yakatarwa podcast uye kushandisa zvakakosha zvekutamba zvekare.
Maitiro ekugovana internet kubva PC neApple
Mashandisiro aungaita yako Android seNintendo Shandura JoyCon